निरुताले ‘नाइँ नभन्नु ल ५’लाई कमब्याक मान्दिनन् ! « रंग खबर
निरुताले ‘नाइँ नभन्नु ल ५’लाई कमब्याक मान्दिनन् !
रंगखबर, काठमाडौँ – अभिनेत्री निरुता सिंहले करिब ८ वर्ष पछि नेपाली फिल्ममा दोस्रो करिअरको सुरुवात गर्दैछिन । अहिले उनि ‘दाल भात तरकारी’को छायाँकनमा व्यस्त छिन् ।
८ वर्ष अगाडी जुन किसिम चर्चा निरुताले पाएकी थिइन् । उनको कमब्याकले पुन: त्यो चर्चा दिलाउदै छ । मुम्बईमा बसेर कमब्याकको तिर्खामा व्याकुल रहेकी निरुतालाई निर्देशक बिकाश राज आचार्यले बाटो कोरिदिए । ‘नाइँ नभन्नू ल ५’मा उनको केमियो रह्यो ।
तर, निरुता ‘नाइँ नभन्नु ल ५’लाई आफ्नो कमब्याक फिल्म मान्न चाहन्निन । अनलाइन खबरको एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छन् ‘म नाई नभन्नु ल ५’ मा काम गर्छु भनेर नेपाल आएको थिइनँ । आएको बेला विकास दाइले अफर गर्नुभयो र मैले नाई भन्न सकिन । तर त्यो मेरो कमब्याक होइन ।’
कलाकारहरु आफ्नो डेब्यु र कमब्याक जोडतोडले होस् भन्ने चाहन्छन । निरुता मात्र होइन यहाँ थुप्रै कलाकार छन् । जसले सानो भूमिकामा डेब्यु र कमब्याक गरेको फिल्मलाई पहिलो मान्न तयार रहन्नन् । तर, मौकाको लागि पहिलो फिल्म आँखा चिम्लेर खेलिदिन तयार हुन्छन । पछि गएर जुन फिल्मले चर्चा र दाम दिलाउछ, त्यहिँ फिल्म पहिलो भनिदिन्छन ।
निरुतालाई ‘नाइँ नभन्नु ल ५’मा भलै केमियोमा प्रस्तुत गरियो । तर, कमब्याकको लागि ढोका खोलिदिने फिल्म त त्यहिँ नै थियो ।